Avylavitra – Page 2 – Malag@sy Miray
Avy any Toamasina: Tanteraka ny famoriam-bahoaka nomanin’ny CRN tany an-toerana. Nisy ny fisamborana. Voasambotra tamin’izany i Tabera R..manatsoa. Raha naka sary izany rehetra izany ny mpanao gazety avy amin’ny TV Plus dia sady niharan’ny daroky ny mpitandro filaminana no nalain’izy ireo koa ny camera fitaovam-piasany Nosamborina sy nalaina am-bavany tany niaraka tamin’ny namany iray ity mpanao gazety ity ary navoaka rehefa tamin’ny 16h 30. Nogiazana ny findain’izy ireo nandritra izany rehetra izany. Avy eto Antananarivo: Nifamotoana teny an-kianja indray ny mpomba ny TGV. Nanao antokony telo izy ireo rehefa nihazo an’Anosy handeha haka Ministera. … Latsaka afovoany ny miaramila ary ireo vadina mpitandro filaminana nitondra sora-baventy no nialoha làlana ny…
Haverina aminsquowhawydny teny Malagasy ny fampianarana eny aminsquowhawydny ambaratonga fototra (primaire) araka ny fanapahan-kevitra noraisinsquowhawydny fitondram-panjakana. Momba izany no nanasànsquowhawydny fahitalavitra tsy miankina iray (TVPlus) ny mpampianatra mpikaroka eny aminsquowhawydny Ambaratonga Ambony RATREMA William, sady mpanorina ny vondrom-panabezana ACCEEM ihany koa.. Ny mpanao gazety nanasa azy kosa dia Onitiana Realy Indro tateriko ho anao etoana ny dinidinika nataonsquowhawydizy mianaka ireo ka ny OR dia raiso ho i Onitiana Realy ary ny RW dia raisintsika hoe RATREMA William
Raha vao miresaka solosaina, dia tsy maintsy tonga ao an-tsaina ny momba ny aterineto. Ary raha vao miresaka aterineto dia tonga indray ao an-tsaina ny mailaka, ny resaka mivantana, ny lalao, ny fitadiavana namana, sns… Izany hoe raha tsorina dia ny « mahafinaritra » no betsaka ampiasan’ny olona ny aterineto. Ireny no be mpitsidika raha vao mitopy any amin’ny fafana eo anoloan’ny olona iray mampiasa solosaina ka mitsidika tranonkalan-tserasera ny maso. Natao tao amin’ny Hotel Carlton Anosy nandritry ny roa andro (28 sy 29 jona 2008) teo ny fetin’ny aterineto teto Madagasikara. Ny AE MISA (Associaton des Etudiants- Maîtrise en Informatique et Statistiques Appliquées) no nikarakara ny hetsika. Tsy azo lazaina ho…
Miarahaba anareo rehetra namako tato ary mbola namako hatramin’izao. Faly aho tafaverina eto rehefa nisy olana kely ny acces teo aloha. Dia ho avy izany ny soratroratra e! Ny fetin’ny aterineto no hanaovana tatitra eto fa eo am-panoratana sy manao fanitsiana. Angamba rahampitso raha sitra-pon’Andriamanitra. Ankoatra an’izay dia milaza vaovao fohy momba an’i KAMBA: Salama tsara ny zaza sy ny reniny na dia tena mbola henjana aza ny fanaraha-maso tsy maintsy ataon’ny mpitsabo. Ny tanan’ny zaza rahateo tsy maintsy andrasana andro aman’alina fa sao misintona ilay serum Izay fa dia faly eeeee!